XAMPP - GNU / Linux တွင် PHP ဖွံ့ဖြိုးမှုပတ်ဝန်းကျင်ထည့်သွင်းရန်လွယ်ကူသည် Linux မှ
ပြီးသားအများအပြားလူသိများသည်အဖြစ်, XAMPP ၏ဖြန့်ဖြူးသည် Apache ကို လုံးဝ အခမဲ့နှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည် အဲဒီမှာပါဝင်သည် MariaDB, PHP နှင့် Perl။ အဘယ်သူ၏ installation package သို့မဟုတ် installer ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူစွာ install လုပ်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဤစီမံကိန်းသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ခေါ် XAMPP, ထက်ပိုမိုရှိပါတယ် ၁၀ နှစ်တာဘဝစီမံကိန်း၏နောက်ကွယ်ရှိသူတို့၏အသိုင်းအဝိုင်းကြောင့်အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။ ဖြစ်ခြင်း, အဖွဲ့အစည်း Apache သူငယ်ချင်းများ ဒီမြှင့်တင်ရေး၏ဤအဖိုးတန်စီမံကိန်းနောက်ကွယ်မှတစ်ခု Apache ဝဘ်ဆာဗာ.
၏ဘာသာရပ်အပေါ်အခြားအဖိုးတန်ယခင်စာပမြေား၌တည်၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ် Tools များ အပေါ် GNU / Linux များကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပမာအားဖြင့်၊ အကောင်းဆုံးသို့မဟုတ်အသုံးဝင်ဆုံးအကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီးပြီ အယ်ဒီတာများ၊ IDE များ၊ SDK များနှင့်ဗားရှင်းထိန်းချုပ်မှုများအမျိုးအစားများအကြောင်း ဝဗ်ဆာဗာများ၊ Programming၊ Scripting နှင့် Markup ဘာသာစကားများနှင့်ပင်အလွန်လျှောက်လွှာကနေ XAMPP.
ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လန်းဆန်းစေမှာပါ installation လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တစ်နည်းပြောရရင်ဂရပ်ဖစ်ဖြစ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်သမျှ၊ terminal (console) ကိုအသုံးမပြုဘဲတစ် ဦး သည်ခေတ်သစ်နှင့်လက်ရှိအကြောင်းကို စက်လည်ပတ်ရေးစနစ် (Distro) အခြေခံ ဒေဗန် ၁၀.
1.1 အဆင့် 1: XAMPP ကို ​​Download လုပ်ပါ
1.2 အဆင့် ၂ - XAMPP တပ်ဆင်ခြင်း
1.3 အဆင့် 3: XAMPP စစ်ဆင်ရေးကိုစစ်ဆေးပါ
1.4 အဆင့် ၄ - XAMPP Service Manager ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်
1.5 အဆင့် 4: XAMPP နှင့်ပတ်သက်။ အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်
အဆင့် 1: XAMPP ကို ​​Download လုပ်ပါ
ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ပထမအဆင့်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သွားသင့်သည် XAMPP ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့သူ့ရဲ့ installation ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ GNU / Linux များ ၎င်း၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း၌တည်၏။ ဘယ်လက်ရှိအားဖြင့်တတ်၏ 7.4.2 ဗားရှင်း အားလုံးပလက်ဖောင်းများအတွက်အောက်ပါ packages များပေး:
Apache ကို 2.4.41
OpenSSL 1.1.1d (UNIX အတွက်သာ)
phpMyAdmin က 5.0.1
အဆင့် ၂ - XAMPP တပ်ဆင်ခြင်း
ကူးယူပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ "ဖိုင် Browser" ငါတို့ folder ထဲမှာကြည့်ပါ "ဒေါင်းလုပ်" installer "Xampp-linux-x64-7.4.2.0-installer.run"အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း run ရအောင်၊ install လုပ်ရမယ် -
၎င်းကို executable file တစ်ခုအဖြစ် configure လုပ်ပါ tab «ခွင့်ပြုချက်များ» ၎င်း၏ဖိုင်ဂုဏ်သတ္တိများ၏။
အဖြစ်အသေးစိတ်က run ပါ အသုံးပြုသူ (superuser)။ နှင့်အမှု၌သင်တို့၏ "ဖိုင်မန်နေဂျာ" အဲ့ဒါကို run ဖို့ခွင့်မပြုပါနဲ့၊ ၎င်းမှ terminal မှသင်လုပ်နိုင်ပါတယ် «ဒေါင်းလုပ်»ဖိုင်တွဲ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
$ cd ဒေါင်းလုပ်များ $ sudo su $ chmod + x xampp-linux-x64-7.4.2.0-installer.run $ ./xampp-linux-x64-7.4.2.0-installer.run
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ -
အဆင့် 3: XAMPP စစ်ဆင်ရေးကိုစစ်ဆေးပါ
၏ကန ဦး boot ကို run ပါ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများ (Apache, FTP, MySQL) အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
အဆင့် ၄ - XAMPP Service Manager ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်
ဒီအလုပ်အတွက်၊ သင်ဖန်တီးရမည် script အသေးစိတ်ဖိုင်ကို execute "Manager-linux-x64.run" အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
ပြီးရင်aတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့် ထဲမှာ System applications မီနူး အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
နောက်ဆုံးအောက်ပါ Command များကို Terminal မှတစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည် တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့် ထဲမှာ System applications မီနူး၏ option ကို marking "ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုတွင်လုပ်ဆောင်ခြင်း" ၀ န်ဆောင်မှုများစတင်ရန်လွယ်ကူစေရန်။
အဆင့် 4: XAMPP နှင့်ပတ်သက်။ အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်
စမ်းသပ်မှုများ (သို့) ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်စီမံကိန်းများမှစနစ်များ / အပလီကေးရှင်းများကိုထားရှိသင့်သည့်တည်နေရာ (ဖိုင်တွဲလမ်းကြောင်း) ကို၎င်းမှကြည့်ရှုရန် "ဝက်ဘ်လမ်းညွှန်" အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံက /opt/lampp/htdocs.
တည်နေရာ (ဖိုင်လမ်းကြောင်း) "PHP configuration ဖိုင်"ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးများကိုကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်။ /opt/lampp/etc/php.ini
၏အသုံးပြုမှုအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များသည် XAMPP သငျသညျကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ် စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်အကူအညီအပိုင်း (FAQs)တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ပြီးတော့မင်းရှိပြီးသားဆိုရင် XAMPP ထည့်သွင်းပြီးပါကလမ်းကြောင်းကိုရိုက်ခြင်းဖြင့်သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် http://localhost/dashboard/es/faq.html သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာတွင်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «XAMPP», တစ် ဦး အသုံးဝင်သောနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာ PHP နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးရေးပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်ုပ်တို့၏တပ်ဆင်ရန်နှင့်စီမံရန်လွယ်ကူသည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း Operating Systemsတစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » XAMPP - GNU / Linux ပေါ်မှာလွယ်ကူစွာ install လုပ်ဖို့ PHP development environment
ကျေးဇူးပြုပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု * ပတ်ဝန်းကျင်။ XAMPP ကိုထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောအချိန်တိုင်းဘုရားသခင်သည်ဘုရားသခင်သည်ကြောင်တစ်ကောင်ကိုသတ်ပစ်သည်။
သွားလိုက်ပါ။ ၀ က်ဘ်ဆာဗာတစ်ခုတည်ဆောက်စဉ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုချင်းစီ၏လက်စွဲထည့်သွင်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျနှစ်သက်သည်၊ အမြဲတမ်းအသုံးပြုလေ့ရှိသော်လည်း XAMPP ကို ​​Windows ရှိအသုံးပြုသူများစွာကအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို GNU / Linux အတွက်သယ်ဆောင်ထားသည်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပရိုဂရမ်ကို GNU / Linux မှာလွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းရွှေ့နိုင်အောင်သို့မဟုတ်ငယ်ရွယ်သောကျောင်းသူကျောင်းသားများသို့မဟုတ်အလုပ်သင်များကိုသူတို့၏နေအိမ်သို့မဟုတ်ကျောင်းသားသို့မဟုတ်သုတေသနပြုရန်သင်ကြားရန်မက်လုံးတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်ကိုသင်ပေးသင့်သည်။
အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ampps ကိုဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။
Toni! ငါ GNU / Linux အကြောင်းကိုဘယ်လိုကြည့်ဖို့ကအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
KaOS 2020.02 သည် Plasma 5.18 LTS, Linux 5.5 နှင့်ထို့ထက်ပိုသောကုမ္ပဏီများသို့ရောက်ရှိသည်